China indondo ifektri abakhiqizi | I-Kingtai
Impumelelo yangempela kufanele inikezwe ukuqashelwa okuyifanele. Izindondo zethu zoqweqwe lwawo koqweqwe lwekhwalithi ephezulu zisho okuningi kakhulu kunokwenziwe ngobuningi, ngaphandle kwezinye izindlela zethala.
Faka owakho umklamo, izinombolo ezilandelanayo nombhalo wokukhumbula kuzindondo ukuqinisekisa ukuthi ngamunye uhlala eyisipho esiyingqayizivele nesikhethekile.
Kutholakala kunoma yisiphi isimo, usayizi noma idizayini enokulungiswa kokuzikhethela kwe-ribbon yentamo, nokuqedwa kwegolide, isiliva nethusi.
Lezi zindondo zilungele izinhlamvu zesitayela "zokusika" noma imiklamo enobukhulu. Ingasetshenziselwa ukukhuthazwa kwenkampani, ezemidlalo futhi isetshenziswe njengesipho esiyisikhumbuzo sabangane, esibonisa inani elihle lobunikazi besithombe.
Izindondo ze-Zinc alloy zinikeza ukuguquguquka okumangalisayo komklamo ngenxa yenqubo yokubumba umjovo, ngenkathi okokusebenza uqobo kuqinile kakhulu kunikeza lezi zindondo isiphetho sekhwalithi. Njengezindondo zoqweqwe olujwayelekile, lezi ezinye izindlela ze-zinc alloy zingafaka imibala yoqweqwe engafinyelela kwemine futhi ingabunjelwa kunoma imuphi umumo.
Senza neminye imisebenzi ukucwenga nokuhlobisa izindondo. Ngale njongo, sibabeka ngaphansi kwe-oxidation noma i-patination ukubenza babukeke bekhulile.
IZIMPENDULO ZE-SOFT ENAMEL
Izindondo zoqweqwe oluthambile zimelela indondo yethu yoqweqwe lomnotho kakhulu. Zenziwe ngensimbi enesitampu noma insimbi ngokugcwaliswa koqweqwe okuthambile futhi zifaka i-epoxy resin enamathela, evikela indondo ekuklwebhekeni futhi inikeze isiphetho esibushelelezi.
Idizayini yakho yangokwezifiso ingafaka imibala efika kwemine futhi ingagxivizwa kunoma isiphi isimo ngezinketho zokuqedwa kwegolide, isiliva, ithusi noma i-nickel emnyama. Ubuncane be-oda ubuningi ngama-PC angama-50.
Lezi zindondo ezinesigxivizo zigcwele ama-vitreous koqweqwe lwawo oluqinile, okubanika impilo ende engenakuqhathaniswa. Ngokungafani izindondo zoqweqwe oluthambile, akukho ukuhlanganiswa kwe-epoxy okudingekayo, ngakho-ke koqweqwe lwawo lubhebhetheka ebusweni bensimbi.
Idizayini yakho yangokwezifiso ingafaka imibala efika kwemine futhi ingagxivizwa kunoma isiphi isimo ngezinketho zokuqedwa kwegolide, isiliva, ithusi noma i-nickel emnyama. Ubuncane be-oda ubuningi bungamakhompiyutha angama-25 kuphela.
I-ZINC ALLOY IZIMPENDULO
Izindondo ze-Zinc alloy zinikeza ukuguquguquka okumangalisayo komklamo ngenxa yenqubo yokubumba umjovo, ngenkathi okokusebenza uqobo kuqinile kakhulu kunikeza lezi zindondo isiphetho sekhwalithi.
Amaphesenti amakhulu wezindondo zoqweqwe ahlukaniswe ngakubili, kepha-ke uma idizayini idinga umsebenzi owenziwe ngakuthathu noma okwehlukaniswe kabili, khona-ke le nqubo ingena kowayo.
Njengezindondo ezijwayelekile zoqweqwe lwawo, lezi ezinye izindlela ze-zinc alloy zingafaka imibala yoqweqwe engafika kwemine futhi ingabunjelwa kunoma imuphi umumo. Ubuncane be-oda ubuningi ngama-PC angama-50.
Langaphambilini Insimbi kaKhisimusi nomhlobiso
Olandelayo: Uhlamvu lwemali
Indondo ye-Brass engu-3d
Indondo Yensimbi Yomklomelo
Imidwebo ye-Brass embossed